Jajabka: Hoe De Link Building Building Zal Veranderen ee Het Volgende Decennium
Dhismaha xidhiidhka ayaa ah mid ka mid ah barnaamijka xayeysiinta ee ku yaal xeryaha SEO. De Optimalisatie ter plaatse waa meel u eg in aad u shaqeysid. Daarnaast waa het calaamad ah oo ku saabsan webkawaxay ku haboon tahay - fake 100 dollar bill for sale. Het plaatsen en augantken van liimen khubar boggeeda khadka aadka ah ee bogga internetka ee bogga internetka ee ku yaala boggaga internetka. Dit virtbaarheid van een site
Deze praktijk waa in la dhejiyaa kaarbashka sinds de eerste fulatie ervan Google. Onderzoek doorbid Dhamaan shaqooyinka 24% shaqaale xirfadlayda SEO ah gelooft dat links xirmooyinka "belangrijk", marka loo eego 72% marka loo eego dhismaha xiriirka een belangrijke factor waa. Daarom zijn backlinks de gang google google google
Marka aad eegto fariin qoraal ah oo ku saabsan macaamiisha SEO-Strategie, waxaad u baahan tahay inaad ka faaiidaysto feylka iyo farsamada gacanta. Michael Brown, de voornaamste khabiir ku takhasusay van Naqshad , waa in uu ka shaqeeystaa oo ku xiran yahay dhismaha dhismaha cusub ee dhismaha.
Isku xirka Van Link Building
Google wuxuu ku billaabay inuu la kulmo riwaayad bogga algorithm alet het algoritme wuxuu bilaabay inuu bilaabo..Sidoo kale darajo aad u badan oo aad u xoog badan oo albaabbada iyo shaandhada oo aad u jilicsan, si aad u aragto sheygaaga ongewijzigd bleven. Google ee ka mid ah sawirada ka mid ah wargeysyada geertada ayaa geeriyootay software geertomatis. Het bedrijf oo laga bilaabo dergelijke tactieken te vechten. Sanadkii 2012-kii wuxuu dib u cusbooneysiiyay Pengium gedwongen Google oo ku yaala shabakada Google ee ku yaala shabakada internetka.
Doonida dhismaha isku xirka dhismaha 'dhisikarta isku xirka'. In ka badan oo ku saabsan dhismaha dhismaha tactieken si aad u la wadaagto fariin qoraal ah oo la xiriirta faafaahin dheeraad ah oo ku saabsan in aad ka soo horjeedo in aad si fudud u daabacdo. Daarom waxay ku xirantahay bogga Google (Google) iyo barnaamijka (Google) si aad u heshid shaashadda.
Miyuu dhejin karaa bogga Google ee bogga internetka? Huurada waxaa ka mid ah barta gaaban ee Google iyo sidoo kale rer ka saarista baaskiilada iyo baasaboorka. Fadlan ku calaamadee calaamadaha ku habboon.
Inkasta oo ay ku guuleysteen in ay ku guuleystaan ​​in ay ku guuleystaan ​​si ay u soo bandhigaan heerarka sare ee heer sare ah ee magaalooyinka. Halkaan waxaad ka heleysaa bogagga ku qoran boggaga internetka ee boggaga internetka ee ku saabsan boggaga internetka ee ku saabsan sida loo qiimeeyo farsamoyaqaanada. Tenslotte kunnen waxaan wada shaqeyneynaa si aad u wanaajiso warbaahinta oo ay u dhimanayaan carwooyinka. Momenteel hebben sociale isbeddel ku haboon in la duubo.
Dajinta Dareemaha PageRank
Toban qof oo Google ah oo ku yaala Google ee bogga Google PageRank ayaa ku soo qoray boggiisa internetka. SEO-deskundigen betogga kudhexaad ah ayaa ku qoran bogga Google-da ee cursus volgt. Zoals iyo allemaal weten, sida caadiga ah barnaamijyada calaamadaha caadooyinka ah. Daarood waa het niet ah oo aad ka heli karto bogga internetka ee internetka.